Hoces del Río Duratón, ogige ntụrụndụ nke mara mma | Akụkọ Njem
na Sickles nke Osimiri Duratón ọ na-ezo aka kpọmkwem na ndagwurugwu nke osimiri ahụ na-eme n'akụkụ ya nke etiti ya na nke dị na mpaghara okike dị oke ọnụ ahịa obibi. E kwupụtara oghere a dị ka ogige nkịtị na 1989 iji chebe ụdị na ahịhịa nke mpaghara ahụ, na-eme ka nke a kwekọọ na ọrụ ugbo na mmepe njem.
Ọ bụrụ na anyị ga-eleta ebe a, nke dị na Mpaghara Segovia, Anyi aghaghi iburu n’uche na o bu ogige okike, ya mere, dika ebe ndi ozo echebe, o nwere iwu ya. Maka ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnwe ọmarịcha gburugburu ebe obibi dị mma iji zuru ike mgbe anyị na-achọpụta ebe mara mma.
1 Otu esi aga Hoces del Río Duratón
2 Mkpa nke mpaghara okike
3 Ihe ị ga-ahụ na Hoces del Río Duratón
3.1 Nkume nke San Frutos
3.2 Ebe obibi ndị mọnk nke Lady anyị nke ndị mmụọ ozi de la Hoz
3.3 Ọgba nke ebe ịchụàjà asaa ahụ
Otu esi aga Hoces del Río Duratón
Osisi mmafili mmiri a dị n'etiti etiti mmiri, nke gwupụtara ụdị ụdị ndị a n'ime okwute limestone nke mpaghara ahụ, na -emepụta ọmarịcha ala nke na-echetara anyị ọdọ mmiri Sil ndị mara mma na Galicia. Ebe a dị n’etiti Sepúlveda na Burgomillodo ọnụ ọgụgụ na Segovia. A mụrụ osimiri Duratón na Community nke Madrid n'akụkụ Somosierra. The gorges bụ ihe dị ka kilomita 25 ogologo ma na njedebe anyị na-ahụ Burgomillodo ọdọ mmiri. Ọ dị mfe ịga Segovia, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ihe dị ka kilomita iri asaa. Nwere ike ịga n'okporo ụzọ site na Lastras de Cuéllar ruo Cantalejo na site na CL-70.
Mkpa nke mpaghara okike
Na Hoces del Río Duratón anyị achọtaghị naanị oghere ndị mara mma na osimiri ị ga-eji ụgbọ mmiri gaa. Otu n'ime ya bụ isi na-adọrọ mmasị idu kpomkwem na ya oké ornithological akụ, na nnukwu ógbè nke griffon vultures, na egbe na ọbụna ugo ọla edo. Nnukwu akụ na ụba ya mere ka obodo kwuo na ọ bụ ogige okike iji chebe ya pụọ ​​na nrigbu ndị ọrụ ugbo ma ọ bụ nke ndị njem.
Ihe ị ga-ahụ na Hoces del Río Duratón
N’akụkụ osimiri a ka enwere isi ihe dị iche iche na echiche nke bukwara nke oma. Ọ dị mkpa ịnwe ụfọdụ echiche nke ihe anyị ga-ahụ ma bura n'uche na a na-eji ụkwụ abanye ọtụtụ imirikiti ihe. E nwere ụfọdụ unyi egwu ebe ị nwere ike iji a njem ma anyị ga-adị njikere ime a mara mma na-eje ije ụzọ site na ebe.
Nkume nke San Frutos
Iji rute ebe a, nke kachasị ama nke ogige okike, ị ga-aga Villaseca wee si ebe ahụ were ụzọ ruru unyi nke edeputara na nke na-eduga na ebe a na-adọba ụgbọala. Site n'ụgbọ ala ị ga-aga n'okporo ụzọ ị ga-aga ebe obibi, nke dị ihe karịrị otu kilomita. Ọ ka mma ịga ebe obibi a n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie, ebe ọ bụ n'ehihie, n'ihi ọnọdụ nke anyanwụ, enwere ike ịse foto dị mma na mpaghara ahụ mara mma nke ukwuu, yabụ ọ ga-abụ ihe ihere ịghara nwee ike iji ya mee ihe. Na obere ụzọ na-aga hermitage Enweela ike ịchọta echiche ole na ole, ụfọdụ n'ime ha enweghị nchebe dị ukwuu, mana nwere echiche dị egwu banyere mmiri gorges na gorges. A na-emechi ebe a na-anọchi ya na nso ebe enwere ebe a na-eli ozu, ebe ị kwesịrị ịga, n'ihi na site na nke a, ị nwere ike ịhụ obere otu griffon vultures na gorges, nke bụ otu n'ime akụ kachasị ọnụ ahịa nke ogige a.
Ebe obibi ndị mọnk nke Lady anyị nke ndị mmụọ ozi de la Hoz
N'akụkụ nke ọzọ nke osimiri ahụ anyị nwere isi ihe ọzọ iji nwee ọ enjoyụ n'echiche. Ihe na-adịghị mma bụ na enweghi akwa ị gafere, mana ị ga-alaghachi n'okporo ụzọ nke hermitage, were ụgbọ ala ma mee njem nke ọkara elekere iji ruo ebe obibi ndị mọnk, nke bụ mkpọmkpọ ebe na obere elekọta . ama m achọtara na nsọtụ ọmarịcha Ma ọ bụ obere ebe ndị njem nleta dị ntakịrị karịa nkata, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ebe nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ, ị nwere ike ị ga-aga ebe obibi ndị mọnk karịa. Akụkụ nke osimiri ahụ bụkwa ebe anyị na-achọta onyinye nke njegharị iji hụ osimiri n'osimiri, ọmarịcha ahụmahụ. Site na ebe obibi ndị mọnk ị nwere ike ịga n'ihu ịchọpụta echiche dị iche iche na mpaghara ahụ. Otu n'ime oge kachasị mma anyị nwere ike ịga mpaghara a bụ mgbede, n'ihi na ọkụ na-enye anyị ohere ịse foto mara mma nke ebe ahụ. O kwere omume ịbịaru elu ebe obibi ndị mọnk ma lee ya site n'akụkụ dị iche iche na echiche ndị dị nso.
Ọgba nke ebe ịchụàjà asaa ahụ
N’akụkụ akwa mmiri ahụ nke gafere osimiri Duratón ka ọgba a dị, nke a na-ahụta dịka ụlọ nsọ Ndị Kraịst kacha ochie na mpaghara, ebe enwere ebe-ichu-àjà asa gwuputara onwe-ha site na nkume ahu. Iji hụ ya n'ime, ị ga-achọpụta mgbe ọ ga-emepe, ebe ọ bụ na awa ya anaghị adị ogologo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » León » Hoces del Río Duraton ogige ntụrụndụ dị na Segovia